Isigaba sokungancintisani: yini okudingeka uyazi? - Law & More B.V.
Blog » Isigaba sokungancintisani: yini okudingeka uyazi?
Isigaba sokungancintisani: yini okudingeka uyazi?
Isigatshana esingaqhudelani, esilawulwa kwezobuciko. 7: 653 weDutch Civil Code, ngumkhawulo ofinyelela kude wenkululeko yomsebenzi wokuzikhethela umsebenzi umqashi angayifaka enkontilekeni yokuqashwa. Ngemuva kwakho konke, lokhu kuvumela umqashi ukuthi avimbele umsebenzi ukuthi angene ekusebenzeni kwenye inkampani, noma ngabe isemkhakheni ofanayo, noma aqale inkampani yakhe ngemuva kokuphela kwenkontileka yokuqashwa. Ngale ndlela, umqashi uzama ukuvikela izintshisekelo zenkampani nokugcina ulwazi nesipiliyoni enkampanini, ukuze zingasetshenziswa kwenye indawo yokusebenza noma njengomuntu ozisebenzelayo. Isigaba esinjalo singaba nemiphumela efinyelela kude kusisebenzi. Ngabe usayine isivumelwano sokuqashwa esiqukethe isigatshana esingaqhudelani? Uma kunjalo, lokhu akusho ukuthi umqashi angakubamba kulesi sigaba somthetho. Isishayamthetho sidwebe izindawo eziningi zokuqala nezindlela zokuphuma ukuvimbela ukuhlukunyezwa okungaba khona nemiphumela engafanele. Kule bhulogi sixoxa ngalokho odinga ukukwazi ngesigatshana esingaqhudelani.
Okokuqala, kubalulekile ukwazi ukuthi umqashi angafaka nini isigaba somncintiswano futhi hhayi lapho kusebenza khona. Isigatshana esingaqhudelani sisebenza kuphela uma kuvunyelwene ngaso ngokubhala nge omdala umsebenzi ongene kwinkontileka yomsebenzi ye isikhathi esingapheli (okuhlukile kugodliwe).
Isisekelo esiyisisekelo ukuthi akukho sigaba esingancintisani esingafakwa kwizivumelwano zokuqashwa kwesikhashana. Ezimweni ezehlukile kakhulu lapho kunezintshisekelo zebhizinisi eziphoqayo umqashi azikhuthaza ngokufanele, isigatshana esingaqhudelani sivunyelwe kwizivumelwano zokuqashwa isikhathi esithile. Ngaphandle kwesisusa, isigatshana esingaqhudelani asisebenzi futhi asisebenzi futhi uma umsebenzi enombono wokuthi isisusa asanele, lokhu kungalethwa enkantolo. Isikhuthazo kufanele sinikezwe lapho kwenziwa isivumelwano sokuqashwa futhi kungenzeka singanikezwa ngemuva kwalokho.
Ngaphezu kwalokho, isigatshana esingaqhudelani kumele, sisuselwe kubuciko. 7: 653 BW isigaba 1 sub b, ngokubhaliwe (noma nge-imeyili). Umqondo walokhu ngukuthi umqashwa ube eseqonda imiphumela nokubaluleka futhi asicabangele kahle lesi sigatshana. Noma ngabe idokhumende elisayiniwe (ngokwesibonelo inkontileka yokuqashwa) lisho isikimu esinamathiselwe sezimo zokusebenza lapho isigatshana siyingxenye yaso, imfuneko iyafezwa, noma ngabe umsebenzi engalusayini lolu hlelo ngokwehlukana. Isigaba somncintiswano esingafaki ukuncintisana esifakwe Esivumelwaneni Sezabasebenzi Esihlanganyelweyo noma emigomeni nemibandela ejwayelekile asisebenzi ngokomthetho ngaphandle kokuthi ukuqwashisa nokugunyazwa kungathathwa ngale ndlela esanda kushiwo.
Yize abantu abasha abaneminyaka eyishumi nesithupha bengangena esivumelwaneni sokuqashwa, umsebenzi kumele okungenani abe neminyaka eyishumi nesishiyagalombili ubudala ukungena esigabeni esivumelekile sokungancintisani.
Okuqukethwe kwesigaba somncintiswano
Yize isigatshana ngasinye esingaqhudelani sihluka ngokuya ngomkhakha, izintshisekelo ezithintekayo nomqashi, kunamaphuzu amaningi afakiwe ezigabeni eziningi ezingezona ezomncintiswano.
Isikhathi. Kuvame ukushiwo esigatshaneni ukuthi zingaki iminyaka ngemuva kokuvinjelwa kwezinkampani zomncintiswano wokuqashwa, lokhu kuvame ukufika eminyakeni engu-1 kuye kwengu-2. Uma kusethwe umkhawulo wesikhathi ongacabangi, lokhu kungalinganiswa yijaji.
Yini evinjelwe. Umqashi angakhetha ukugodla isisebenzi ukuthi sisebenzele bonke abancintisana nabo, kepha futhi angaqamba izimbangi ezithile noma akhombise irediyasi noma indawo lapho umsebenzi engenakwenza umsebenzi ofanayo. Kaningi kuyachazwa nokuthi hlobo luni lomsebenzi okungenziwa.
Imiphumela yokwephula isigatshana. Isigaba somthetho kaningi siqukethe nemiphumela yokwephula isigatshana esingaqhudelani. Lokhu kuvame ukufaka inhlawulo yenani elithile. Ezimweni eziningi, kubekwa nenhlawulo: inani okufanele likhokhwe nsuku zonke lapho umsebenzi wephula umthetho.
Ijaji lilandele ubuciko. 7: 653 weDutch Civil Code, isigaba 3, kungenzeka ukuthi kusulwe isigatshana esingaqhudelani ngokuphelele noma ingxenye uma kuhilela ukungabi nangqondo okungafanelekile kwesisebenzi okungahambisani nezintshisekelo zomqashi okufanele zivikelwe. Isikhathi, indawo, imibandela kanye nenani lenhlawulo kungalinganiswa yijaji. Lokhu kuzobandakanya ukukalwa kwezintshisekelo yijaji, okuzohluka ngesimo ngasinye.
Izimo eziphathelene ne- izintshisekelo zesisebenzi ezidlala indima yizici zemakethe yezabasebenzi njengokuncipha kwamathuba emakethe yezabasebenzi, kodwa izimo zomuntu siqu nazo zingabhekwa.
Izimo eziphathelene ne- izintshisekelo zomqashi ezidlala indima amakhono akhethekile nezimfanelo zesisebenzi kanye nenani elingaphakathi lokugeleza kwebhizinisi. Ngokwenzayo, lokhu kokugcina kuza embuzweni wokuthi ukugeleza kwebhizinisi lenkampani kuzothinteka yini, futhi kuyaqinisekiswa ngokuqinile ukuthi isigatshana esingaqhudelani asihloselwe ukugcina abasebenzi ngaphakathi kwenkampani. 'Ukuthi nje umsebenzi uthole ulwazi nesipiliyoni ekusebenzeni kwesikhundla sakhe akusho ukuthi ukusebenza kwebhizinisi lomqashi kuthintekile lapho leso sisebenzi sihamba, noma lapho leso sisebenzi sishiya umuntu esincintisana naye. . ' (Hof Arnhem-Leeuwarden 24-09-2019, ECLI: NL: GHARL: 2019: 7739) Izinga lokugeleza kwebhizinisi liyathinteka uma isisebenzi sazi imininingwane ebalulekile yezentengiselwano nezobuchwepheshe noma izinqubo namasu wokusebenza ayingqayizivele futhi angakusebenzisa lokhu ulwazi ukuze kusizakale umqashi wakhe omusha, noma, ngokwesibonelo, lapho umsebenzi abe nokuxhumana okuhle nokuqinile namakhasimende angashintshela kuye futhi ngaleyo ndlela ancintisane naye.
Isikhathi sesivumelwano, esiqale ukunqanyulwa, kanye nesimo somsebenzi nomqashi wangaphambilini nakho kuyabhekwa lapho inkantolo ibheka ukuba semthethweni kwesigatshana esingaqhudelani.
Izenzo ezimbi kakhulu
Isigaba somncintiswano, ngokuhambisana nobuciko. 7: 653 weDutch Civil Code, isigaba 4, awumi uma ukunqanyulwa kwesivumelwano sokuqashwa kungenxa yezenzo ezibucayi noma ukweqiwa komqashi, lokhu akunakwenzeka. Isibonelo, kunezenzo ezibucayi noma ukweqiwa okukhona uma umqashi enecala lokubandlululwa, akuhlangabezani nezibopho zokubuyiselwa emsebenzini uma kwenzeka umsebenzi egula noma enganakwa ngokunganaki ngokwanele ezimeni zokusebenza eziphephile nezinempilo.
Umbandela weBrabant / Van Uffelen
Kubonakele esinqumweni seBrabant / Uffelen ukuthi uma kukhona ushintsho olukhulu ebudlelwaneni bokuqashwa, kufanele kusayindwe isigatshana esingeyona imincintiswano uma isigatshana esingewona umncintiswano siba wumthwalo omkhulu ngenxa yalokho. Imibandela elandelayo iyabonakala lapho usebenzisa umbandela weBrabant / Van Uffelen:
ngenxa yalokho isigatshana esingaqhudelani siye saba wumthwalo omkhulu
'Ushintsho olukhulu' kufanele luhunyushwe kabanzi ngakho-ke akudingeki ukuthi lukhathalele kuphela ushintsho ekusebenzeni. Kodwa-ke, empeleni umbandela wesine kaningi awuhlangatshezwa. Kwakunjalo, ngokwesibonelo, esimweni lapho isigatshana esingewona umncintiswano sathi umsebenzi akavumelekile ukusebenzela ozoncintisana naye (ECLI: NL: GHARN: 2012: BX0494). Njengoba isisebenzi besesithuthukile sisuka kumakhenikha saya kokuthengisa ngesikhathi esasebenzela inkampani, lesi sigatshana besivimbela isisebenzi kakhulu ngenxa yokushintshwa komsebenzi kunangesikhathi sokusayinwa. Ngemuva kwakho konke, amathuba emakethe yezabasebenzi manje abesemakhulu kakhulu kumqashwa kunakuqala njengomakhenikha.
Kubalulekile ukuqaphela lapha ukuthi ezimweni eziningi isigatshana esingaqhudelani sichithwa ngokwengxenye kuphela, okusho ukuthi njengoba sesibe ngumthwalo omkhulu ngenxa yoshintsho lomsebenzi.
Isigaba somthetho esingewona owokucela sihlukaniswe nesigatshana esingaqhudelani, kepha sifana naso. Endabeni yesigatshana sokungaceli, umsebenzi akavunyelwe ukuya ukusebenzela ozoncintisana naye ngemuva kokuqashwa, kodwa ekuthintaneni nokuxhumana namakhasimende nobudlelwano benkampani. Lokhu kuvimbela, isibonelo, isisebenzi ekubalekeni namakhasimende athe wakwazi ukwakha nawo ubudlelwano obuthile ngesikhathi sokuqashwa kwawo noma ukuxhumana nabaphakeli abathandekayo lapho eqala ibhizinisi lakhe. Imibandela yecala lokuncintisana okukhulunywe ngalo ngenhla nayo isebenza esigatshaneni sokungaceli. Isigaba somthetho sokungaceli sisebenza kuphela uma kuvunyelwene ngakho ngokubhala nge omdala umsebenzi ongene kwinkontileka yomsebenzi ye isikhathi esingapheli yesikhathi.
Ngabe usayine isigatshana esingaqhudelani futhi uyafuna noma unomsebenzi omusha? Sicela uxhumane Law & More. Abameli bethu bangongoti emkhakheni womthetho wokuqashwa futhi bayakujabulela ukukusiza.
Thumela Previous Umthetho wokuqothuka nezinqubo zawo
Post Next Isinxephezelo soguquko senkontileka yomsebenzi: Sisebenza kanjani?